Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Maanta Oo Axad Ah Ka Qoreen Wargaysyada Yurub. - Gool24.Net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Maanta Oo Axad Ah Ka Qoreen Wargaysyada Yurub.
July 7, 2019 Mahamoud Batalaale
Asalaamu calaykum, idilkiinba salaan akhristayasha sharafta lahow kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wararka suuqa kala iibsiga iyo waxyaabihii ay wargaysyada Yurub ka qoreen maanta oo Axad ah.
Wararka Suuqa The Sun Day Times
Kooxda Juventus ayaa doonaysa in ay 120 milyan gini ku dalbato xidigii hore ee kooxdeeda ee Pual Pogba iyada oo qorshaheedu yahay in ay noqoto kooxda kaalinta kowaad kaga jirta suuq gaynta horyaalada Yurub.
Kooxda Manchester United ayaa isku diyaarinaysa in ay dalab £30 milyan gini ah ka gudbiso xidiga kooxda Newcastle United ee Sean Longstaff.
Manchester United ayaa ka walwalsan in Paul Pogba uu ka soo xaadiri waayo tababarka ay ugu duulayaan Australia kadib markii uu hore u cadeeyay in uu bixitaan doono isla markaana uu wakiilkiisa Mino Raiola saxaafada ka sheegay in ay Pogba ka go’antahay in uu baxo.
Mulkiilahaa kooxda Everton ee Farhad Moshiri ayaa dalab hami sare ah la soo baxay kadib markii uu maamulka kooxdiisa ku armray in ay soo qiimeeyaan in ay la soo saxiixan karaan gool dhaliyihii hore ee kooxda Chelsea ee Diego Costa kaas oo la filayo in uu Atletico Madrid ka bixi doono xagaagan.
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa laba jeer xidiga kooxdeeda ee Neymar Jr u soo bandhigtay Real Madrid laakiin maamulka Florentino Perez ayaa labada jeerba iska diiday lacagta ay PSG ku doonayso Neymar oo ay u arkaan in ay tahay lacag kharash badan ku ah kooxdooda.
Arsenal ayaa dhibaato kala kulmaysa xiisihii ay u haysay xidiga kooxda Barcelona ee Malcom kadib markii ay kooxda Paris Saint-Germain ka mid noqotay kooxaha xiisaynaya xidiga reer Brazil.
Goolhaye Manuel Neuer ayaa ka fiirsanayo in uu iskaga baxo kooxda uu waqiga dheer ku soo qaatay ee Bayern Munich wuxuuna sababta bixitaankan wakiilkiisu ku tilmaamay in ayna Bayern lahayn hami wayn.
Manchester United ayaa war fiican ka heshay kooxda Atletico Madrid oo ay suurtogal tahay in lagu qasbo in ay xagaagan iibiso Saul Niguez kaas oo ay hore heshiis ula galeen waxayna United ka mid ahayd kooxaha waqtiga badan isha ku hayay Niguez.
Arsenal ayaa la sheegay in ay isku taagtay sidii ay kula soo saxiixan lahayd xidiga ay waqtiga daba socotay ee William Saliba kaas oo al sheegay in ay dalab £30 milyan gini ah ka gudbiyeen.
Xidiga kooxda Man United ee Nemanja Matic ayaa doonaya in uu wadahadal la yeesho macalinka kooxdiisa United ee Ole Gunnar Solskjaer kadib xiisaha uga imanaya kooxda Inter Milan.
Liverpool ayaa muhiimada kowaad ka dhigatay sidii ay xagaagan ula soo saxiixan lahayd gool dhaliyaha kooxda Lille ee Nicolas Pepe kaas oo uu madax waynaha kooxdiisu xajiiyay in Reds ay wada xaajood la gashay wakiilka xidigan.